को हुन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको कमाण्ड समाल्न आउने एसपी मैनाली? – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. को हुन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको कमाण्ड समाल्न आउने एसपी मैनाली? – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
को हुन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको कमाण्ड समाल्न आउने एसपी मैनाली?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको कमाण्ड समाल्न अब दिनेश मैनाली आउने भएका छन्। केही दिन अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५२ प्रहरी उपरीक्षक(एसपी)को सरूवा गरेको थियो। जस्मा एक वर्ष कार्यकाल सकिएका तनहुँका अरूण पौडेललाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा सरूवा गरेको छ भने बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडामा कार्यरत एसपी दिनेश मैनाली तनहुँ सरूवा भएका छन्।
को हुन् त जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको प्रमुखको रूपमा आउन लागेका एसपी मैनाली प्रहरी संगठन भित्र एक्सन म्यानको रूपमा परिचित छन्। बारा जिल्ला कुल्वीमा जन्मिएका मैनाली प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। प्रहरी निरीक्षक हुदा गोर्खा जौवारी र जनसेवा प्रहरी वृत्तको नेतृत्व गरेका थिए भने प्रहरी नायब उपरीक्षक भएपछि जाजरकोट र नेपाल प्रहरी विद्यालय साँगामा प्रमुख भएर काम गरेका व्यक्ति हुन्।
त्यस्तै प्रहरी उपरीक्षक हुदा गृह मन्त्रालय,जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको प्रमुख र बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडामा रहेका थिए। एसपी मैनाली लाईबेरीया, पूर्वी टिमोरमा शान्ति मिसन पनि गएका थिए।
एसपी मैनाली निकै अनुभवी, पेशाप्रति निष्ठावान प्रहरी अफिसरको रूपमा परिचित छन्।अपराधशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका मैनाली अनुसन्धानमा अब्वल अफिसरमा चिनिन्छन्। झापामा प्रहरि प्रमुख रहदा गुण्डागर्दी,चोरी डकैती र लागू औषध ओसार पोसार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सफल भएका थिए। झापामा मैनालीको कमाण्ड देखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सन्तुष्ट थिए। मैनाली गृह मन्त्रालय हुदा गृहसचिव निकट भएर काम गरेका एसपी हुन्। राजनितीक हिसाबले निकै शक्तिकेन्द्रका रूपमा हेरिने तनहुँको बसाइ कस्तो रहन्छ त्यो त भविष्यले पक्कै बताउनेछ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको १४ असार २०७८, सोमबार June 28, 2021 391 Viewed